The Myanma Age အပြည့်အစုံသို့ »
7/19/2014 02:54:00 PM funny
အိမ်ပြန်ရောက်အောက် မပြန်နိုင်ဖူးဟု ယူဆကြသဖြင့် တည်းခိုခန်းတစ်ခန်းတွင်ဝင်အိပ်ကြသည်။
အခန်းထဲရောက်တော့ မူးမူးနှင့်မီးခလုပ်လိုက်စမ်းကြသည်။ မတွေ့။ သို့နှင့် အမှာင်ထဲမှာပဲ အိပ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြသည်။
နှစ်ယောက်သား ခုတင်ပေါ်တက်ကြရင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စမ်းမိကြသည်။
" ဟေ့ရောင်သူငယ်ချင်း ငါ့ခုတင်မှာ လူတစ်ယောက်ရှိနေတယ်ကွ ငါ့ကိုလာစမ်းနေတယ် "
"အေး... ငါ့ခုတင်ပေါ်မှာလည်း လူတစ်ယောက်ရှိနေတယ် ဒီကောင်လည်းငါ့ကို လာစမ်းနေတယ.်.မထူးဘူးဟေ့ရောင် ကိုင်ပေါက်ကြရအောင် "
နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကိုင်ပေါက်ကြသည်။
တစ်ယောက်ခုတင်ပေါ်တွင် ကျန်၍ တစ်ယောက်ခုတင်အောက်ကျသွားသည်။
ခုတင်အောက်က ငမူးက ဤသို့ပြော၏။
"ဟေ့ရောင် သူငယ်ချင်း ငါ့ခုတင်ပေါ်ကကောင်ကို ငါမနိုင်ဘူး ဒီကောင်က ဗလကောင်းတယ်ကွ ငါ့ကိုခုတင်ပေါ်က ပစ်ချတယ် "
ထူးပါဘူး သူငယ်ချင်းရယ် လာငါနဲ့ပဲ လာအိပ်တော့ "
ချစ်ချစ်ခင်ခင်နှင့်ဖက်အိပ်ကြ လေ၏။ ။
အမေရိကန်တိုးရစ်တစ်ယောက်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်နေရင်း taxi ကားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ကို ပတ်လေသည်။
ဒရိုင်ဘာမှာ မြန်မာလူမျိုး ဖြစ်သည်။ သွားရင်းလာရင်းနှင့်  ဘုရင့်နောင် ဂုံးကျော်တံတားသို့ ရောက်လာသည်။ ထိုအခါ အမေရိကန်ကြီးမှ မေးလိုက်သည်။
" ဟေ့....... ဟိုတံတားက ဘာတံတားလဲ...."
" ဘုရင့်နောင်ဂုံးကျော်တံတား လို့ ခေါ်ပါတယ်......"
" တံတားဆောက်တာ ဘယ်လောက်ကြာလဲကွ......"
" ဒါမျိုးတံတားတွေကို ငါတို့ အမေရိကန်မှာ ဆို၇င် ၆လလောက်နဲ့ပြီးတယ်....."
ထို့နောက် ဆက်မောင်းလာရင်း လှည်းတန်း တံတားနား ရောက်လာသည်။ အမေရိကန်တိုးရစ်မှ ထပ်မေးပြန်သည်။
" အင်း.... ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ ငါတို့ဆီမှာ ၂လလောက်နဲ့ ဆောက်လို့ရတယ်......"
မြန်မာလူမျိုးကားသမားသည် နည်းနည်းတော့ ဒေါသထွက်လာသည်။ ဒီအမေရိကန်တိုးရစ် သက်သက်လာ ကြွားနေတာခံရသည်။ ကားဆက်မောင်းလာရင်းနှင့် ရွှေခုံတိုင်ဂုံးကျော်တံတားပေါ်သို့ ရောက်လာသည်။ အမေရိကန် တိုးရစ်က မေးပြန်သည်။
" ဒီတံတားကရော ဘာတံတားလဲဟင်......"
" ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူးခင်ဗျာ.......မနက်ကလာတုန်းက ဒီမှာ ဘာမှမရှိသေးဘူး........"
လူမှု ဆက်ဆံရေးတွင် အပြောနှင့် မတူညီသော ရလဒ် နှင့် အဓိပ္ပါယ်များ
7/19/2014 10:55:00 AM funny
စကားဆိုတာ ပြောတာနဲ့ တကယ် ရလဒ်နဲ့က အမြဲ မတူ နိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ May be ဆိုရင် Diplomatic မှာ No လို့ ပြောသလိုမျိုးပဲ သာမန် လူမှု ဆက်ဆံရေးမှာလည်း ကွဲပြား မှုများ ရှိနေ ပါတယ်။ ဥပမာ -
၁။ ‘အဲ့ဒီအစီစဉ်ကောင်းတယ်။ ငါလိုက်နိုင်မလိုက်နိုင် ပြန်အကြောင်းပြန်မယ်လေ’ အဲ့ဒါ မလိုက်တော့ဘူး၊ မပါတော့ဘူးလို့ ပြောတာနဲ့ မကွာပါဘူး။
၂။ ‘ရိုင်းတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ အမှန်အတိုင်း ပြောရမယ်ဆိုရင်’ အဲ့ဒါ တစ်ဖက်သား နားမခံနိုင်မယ့် စကားမျိုးတွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ ၃။ ‘အင်းပါ စိတ်ချ သူတို့ကို ငါဘယ်တော့မှ မပြောဘူး’ အဲ့ဒါ သူတို့ကို မပြောပေမယ့် အခြားလူတွေကို ပြောပါလိမ့်မယ်။ ၄။ ‘အဲ့ဒါနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ (သို့မဟုတ်) အဲ့ပုံစံနဲ့လည်း ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ ‘ ‘ငါဆိုရင် အဲ့လိုမျိုး တစ်ခါမှ ဝတ်စားမှာ မဟုတ်ဘူး။ အချိန်မရတော့လဲ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ အဲ့သလိုပဲ လိုက်ခဲ့’
၅။ ‘ခုလို ခင်ရလို့ ဝမ်းသာတယ်။ နောက်မှ အေးဆေးတွေ့ကြတာပေါ့’ မျော်လင့်မနေပါနဲ့ သင့်ကို သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ စာရင်းထဲ မထည့်ပါဘူး။
၆။ Congratulation ပါ သယ်ရင်း။ ဒမင်းတို့ နှစ်ယောက် မင်္ဂလာပွဲ အတွက်တာ့ ဝမ်းသာတယ်ကွာ…’ ငါကတော့ လူပျိုလူလွတ်ဘဝမှ အေးဆေးပဲ။ မင်းတို့တော့ ဒုက္ခရောက်ပေတော့
၇။ မင်တို့တွေ ကျောင်းပြီးကတည်းက ဘာတွေ လုပ်ဖြစ်ကြသလဲ ပြောစမ်းပါအုံး ‘ငါတို့ထဲက ဘယ်သူဟာ ကျောင်းပြီးကတည်းကက ဒီအချိန်မှာ အအောင်မြင်ဆုံးလည်း ဆိုတာကို ကြည့်ရသေးတာပေါ့’
၈။ ဟုတ်လား။ ဖုန်းထဲစာရောက်လာမှန်း ငါမသိလိုက်ပါဘူး။ များသောအားဖြင့် အဲ့ဒါ စာဖတ်ပြီးသားရဲ့ တမင် မပို့ပဲ ထားပြီး တစ်ဖက်သား စိတ်ချမ်းသာအောင် ပြောတာပါ။
၉။ တ⁠တ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပေးကြည့်မယ်လေ။ မရတော့ပါဘူးဆိုမှ ဇွတ်ပဲ။ စိတ်ချမ်းသာအောင်တော့ ပြောပေးလိုက်ပါမယ်။
၁၀။ မင်းကို တကယ် ရိုသေပါတယ်။ အဲ့ဒါ လုံးဝ မရိုမသေတာ ပါပဲ…
မှတ်ချက် – ရယ်စရာ သက်သက်သာ
(အမှန်စင်စစ် – အယူအဆ ကွဲလွဲချက်များ မတူညီသည့်အခါ ငြင်းရမှာ ကြော်က်သဖြင့် ‘ရယ်စရသက်သက်သာ’ ဟု စကားခံခြင်းဖြစ်သည်။ )
7/16/2014 12:29:00 PM funny
ကိုမိုးကြီးက ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ၊ နယ်ဘက်မှာ တံတားဆောက်ဖို့ တာဝန်ကျတယ်။
သူ့မိန်းမက ကျောင်းဆရာမ၊ မြို့ပေါ်မှာ တာဝန်ကျတယ်။
ဒီတော့ မိန်းမလုပ်သူက ယောက်ျားတာဝန်ကျရာကို လိုက်နေလို့ မရဘူး။
သီတင်းကျွတ်မှာ ကျောင်းက တပတ်ပိတ်တော့ ကိုမိုးကြီးရှိရာကို သူ့မိန်းမ လိုက်လာတယ်။
ကျန်တာက ပြသနာမရှိပေမယ့် အိမ်ဖော်ကောင်မလေး ခေါ်ထားတာက ပြသနာဖြစ်နေတယ်။
‘ရှင့် အိမ်ဖော်ကလဲ ချောလှချည်လား ကိုမိုးကြီးရဲ့’
‘ချောလား မချောလား မသိပါဘူးကွာ၊ အဝတ်လျှော် ထမင်းချက်တတ်ရင် ပြီးတာဘဲ ဆိုပြီး ခေါ်ထားလိုက်တာပါ’
‘တအိမ်လုံးမှာ ရှင်တို့နှစ်ယောက်ထဲ ဆိုတော့’
‘ဘာဆိုင်လဲကွာ၊ ညမိုးချုပ်တာနဲ့ သူ့အခန်းသူအိပ်၊ ငါ့အခန်းငါအိပ် သီးခြားဆီပါ’
ဒီလိုနဲ့ ကျောင်း ပြန်ဖွင့်တော့ သူ့မိန်းမလည်း ပြန်သွားတယ်။
နှစ်ရက်၊ သုံးရက်နေတော့ အိမ်ဖော်လေးက သတင်းပို့တယ်။
ဟင်းချက်တဲ့ ဒယ်အိုးကြီး ပျောက်နေတယ်တဲ့။
ဆရာမ ပြန်သွားကတည်းက ပျောက်တာ၊ မှားများပါသွားလေသလား မေးကြည့်ပါအုံး ဆိုတော့….
ကိုမိုးကြီးလည်း သူ့မိန်းမဆီ စာရေးပြီး မေးရတာပေါ့… …
မင်းပြန်သွားကတည်းက ဒယ်အိုးကြီး ပျောက်နေလို့’
သူ့မိန်းမဆီက စာပြန်လာတယ်… …
ရှင်တို့ အတူအိပ်တယ်လို့ မစွပ်စွဲပါဘူး
သူသာ သူ့အိပ်ယာမှာ သူအိပ်ရင် ဒယ်အိုးကို ပြန်တွေ့တာ ကြာပြီ၊
credit > မောင်ကောင်းထိုက် အပြည့်အစုံသို့ »
7/15/2014 03:21:00 AM funny
အတန်းစီနေချိန် “သယ်ရင်း. မင်းဘာလုပ်နေလဲ” ဟု အမေးခံရသောအခါ အကောင်းဆုံးအဖြေ – “အေး လက်မှတ် တစ်စောင်နဲ့ သိန်းတစ်ထောင် အလကား ပေးတယ်ဆိုလို့ တန်းစီနေတာလေ”
အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ဒေါက်ဖိနပ်ချွန်ဖြင့် တက်နင်းပြီး “ဆောရီးနော်. နာသွားလာဟင်” ဟု မေးသော အခါ အကောင်းဆုံး အဖြေ – ” ဟင့်အင်း. ခြေထောက်က သံနဲ့ လုပ်ထားတာ။ မာနေတာပဲ။ နောက်တစ်ခေါက် ထက်နင်းပါအုံး”
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပြီး “ဆောရီး..။ အိပ်ပျော်နေတာလား” ဟု မေးသောအခါ အကောင်းဆုံး အဖြေ “ဟင့်အင်း ငါးလေးတွေ ဘယ်အချိန်အိပ်တတ်လည်း သိချင်လို့ မအိပ်ပဲ Research လုပ်နေတာ”
သူငယ်ချင်းက ” သယ်ရင်း မင်းဆံပင်ညှပ်ထားတာလား” ဟု လာမေးလျှင် အကောင်းဆုံး အဖြေ ” ဟင့်အင်း၊ ဆံပင်တွေ နွေဦးရောက်လို့ သူ့ပါသူ ကြွေကုန်တာ”
သူငယ်ချင်းက “သယ်ရင်း မင်းဘယ်တွေရောက်နေလဲ” ဟု မေးသော အခါ အကောင်းဆုံး အဖြေက “အေး၊ ငါ့အိမ်ဖုန်းကို လည်ပင်းမှာဆွဲပြီး စူပါမားကတ် လျှောက်သွားနေတယ်”
အိမ်နီးချင်းမိတ်ဆွေက “မိတ်ဆွေ ကားရေဆေးနေတာလား” ဟုမေးသော အခါ အကောင်းဆုံး အဖြေ – “ဟင့်အင်း ကားကို ရေလောင်းပေးတော့ ဘော်ဒီများ ပိုကြီးလာမလားလို့ပါ
သူငယ်ချင်းက ရောက်လာပြီး “မင်း တီဗီကြည့်နေတာလား” ဟုမေးသော အခါ အကောင်းဆုံး အဖြေ “ဟင့်အင်း တီဗီထဲကနေ လူတွေ အပြင်ထွက်လာ မလားလို့ စောင့်ကြည့်နေတာ”
အစရှိသဖြင့် မဆီလျော်သော မေးခွန်းနှင့် မဆီလျော်သော အဖြေများစွာ …
အောင်ခမ်း ( ရိုးရာလေး ) အပြည့်အစုံသို့ »
__ #[email protected] ( မချိုမချဉ်ဟာသများ ) :D
7/05/2014 08:22:00 PM funny
အင်္ဂလန်အသင်းလက်ရွေးစင် ဂျွန်တယ်ရီသည် ဝေးလ်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိပြီးနောက်
ဝမ်းသာအားရဖြင့် သောက်စားပြီး သူတည်းခိုရာသို့ ပြန်ရောက်လာသည်။
အခန်းတံခါးဖွင့်လိုက်သောအခါ သူ့ဇနီးကို အခြားလူတစ်ယောက်နှင့်
ပက်ပင်းတွေ့လိုက်ရ၍ စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ ထိုသူကို ပြတင်းပေါက်မှ
‘အင်း ဒီငနဲတော့ မသေတောင် ကျိုးပဲ့သွားမှာ အသေအချာပဲ’
‘မသေဘဲနေပါ့မလားရှင်၊ ဒီအထပ်က ၂၅ ထပ်တောင်မြင့်တာလေ’
‘ဘာ၊ ၂၅ ထပ်ဟုတ်လား၊ ဘုရား ဘုရား၊ ဒါဆို ကျွန်တော်မူးမူးနဲ့
အထပ်မှားပြီးဝင်လာမိပြီထင်တယ်။ ကျွန်တော်နေတာ ၈ လွှာမှာ။ ခင်ဗျားလည်း
ကျွန်တော့်မိန်းမ မဟုတ်ဘူး၊ ဆောရီးနော်’
7/03/2014 01:34:00 AM funny political-news
အရိုင်းနှင့် နေဇော်နိုင်တင်ဆက်သည့် ဒီဗီဘီ အစီစဉ်သစ် ( ၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၄)
DVB TV New
7/02/2014 08:39:00 AM funny
ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသော လူတစ်ယောက်သည် မသေမီ အလွန် ကပ်စေးနည်း သော်လည်း ကွယ်လွန်သော အခါ နတ်ပြည် ၀င်ခွင့် ပြုရန် သိကြားမင်းထံသို့ ခွင့်ပန်လေသည်။
"မောင်ရင်ကို နတ်ပြည် ၀င်ခွင့် ပြုနိုင်ဖို့ လူ့ပြည်တုန်းက ပြုခဲ့တဲ့ ကောင်းမှု့ ကုသိုလ်တွေ ပြောပြစမ်း"
"တစ်ခါက သူတောင်းစား တစ်ယောက်ကို ဆယ်ပြား ထည့်ဖူးပါတယ်... ရပ်ကွက် သံဃာ့ဒါန အလှုခံမှာ ငါးမူး လှူခဲ့ပါတယ်"
"သြော်... မေ့လို့ ဘုရားဖူး ထွက်တော့ စံပယ်ပန်း ဆယ့်ငါးပြားဖိုး လှုခဲ့ပါတယ်"
"အင်း... အားလုံး လှုခဲ့တာ သုံးမတ်ပဲ"
"ဟေ့ မာတလိ... ဒီကောင်ကို ပိုက်ဆံ သုံးမတ် ပြန်အမ်းပြီး ငရဲ ပို့လိုက်ပါကွာ"
credit > unknown
မချိုမချဉ်ဟာသများ အပြည့်အစုံသို့ »
7/02/2014 08:12:00 AM funny
အမေရိကန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်၊ တရုတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်နှင့် မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တို့
ရေကန်တစ်ခုအနီးတွင် ထိုင်နေကြသည်။ ထိုကန်ထဲတွင် မိကျောင်းများမွေးထားသည်။
အမေရိကန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်က သူ့ကိုယ်ရံတော်စစ်သား၏ အမိန့်နာခံမှုကို
သက်သေပြရန် နာရီကိုချွတ်၍ ရေကန်ထဲလွှင့်ပစ်လိုက်သည်။
“ကိုင်း၊ ရဲဘော်၊ ငါ့နာရီကို ပြန်ယူပေးစမ်း”
နာရီပြန်ယူလာခဲ့သည်။ အနီးရှိ သတင်းထောက်များနှင့် ၀န်ထမ်းများက
လက်ခုပ်တီးပြီး အားပေးလိုက်ကြသည်။ တရုတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကလည်း အားကျမခံ
သူ့နာရီကို မိကျောင်းကန်ထဲ လွှင့်ပစ်လိုက်ပြီး သူ့သက်တော်စောင့်ကို
ကိုယ်ရံတော်တရုတ်စစ်သားက ရေထဲဒိုင်ဗင်ထထိုးပြီး နာရီကို ပြန်ယူလာခဲ့သည်။
ကြည့်နေသူအားလုံး တကယ့်သတ္တိခဲဟု အော်ဟစ်အားပေးလိုက်သည်။
မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကလည်း အားကျမခံ သူ့နာရီကိုရေကန်ထဲပစ်ချလိုက်ပြီး
“ကဲ၊ ငါတဆို့ မြန်မာ့သတ္တိလည်း ပြလိုက်စမ်းကွာ”
“ဟင့်အင်း၊ ဒါ သတ္တိမဟုတ်ဘူး၊ မိုက်ရူးရဲတာပဲဗိုလ်ချုပ်၊ ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူး”
ထိုအခါ ရပ်ကြည့်နေသူ ပရိသတ်အားလုံးက ကျယ်လောင်စွာ အော်ဟစ်အားပေးလိုက်ကြသည်။
“ဒါမှ တကယ့်သတ္တိကွ၊ တကယ်သတ္တိ”
7/01/2014 05:22:00 PM funny
6/29/2014 09:49:00 AM funny
ရန်ဖြစ်နေကြတဲ့ ချစ်သူ နှစ်ဦးမှာ မာန်မာန ကြီးတဲ့ ချစ်သူ အမျိုးသမီးက ယခုလို ပြောပါတယ်။
အမျိုးသမီး – ကျမ ဟာ အင်တာနက် ဆိုတာကို လုံးဝ သုံးတော့တဲ့သူ မဟုတ်ဘူး။
အမျိုးသား – ဘာဖြစ်လို့လဲ
အမျိုးသမီး ကျမ ပထမ ပြတ်သွားတဲ့ ချစ်သူက အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်တာ။
ကျမ ဒန်ပေါက် ကို ဒီတစ်သက် စားတော့မှာ မဟုတ်ဘူး
အမျိုးသမီး – ပြတ်သွားတဲ့ ကျမ ရဲ့ ဒုတိယ ချစ်သူက ဒန်ပေါက်ဆိုင် ဖွင့်ထားလုိ့
အမျေိုးသား – အော်. ဒါပေမယ့် မင်းကိုယ့်ကိုယ် ပြတ်လို့ ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
အမျိုးသမီး – အို. ဘာဆိုင်လို့လဲ..
အမျိုးသား – အေး. ကိုယ်က အဝတ်အထည် ဆိုင် ဖွင့်ထားတယ်။
innewsmyanmar.com အပြည့်အစုံသို့ »
6/29/2014 09:19:00 AM funny
တနေ့ မှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ၀န်ထမ်း အသစ်ခေါ်ပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း အင်တာဗျူးတာပေါ့လေ....Psycho questions (ဆိုင်ကိုမေးခွန်း) တွေမေးပါတယ်။
" လောကမှာ အမြန်ဆုံး အရာက ဘာလဲ ဆိုတာ ဖြေနိုင်ရင်ဖြေပါ..."
" ဟုတ်ပါပြီ ဘာလို့အဲ့လိုပြောနိုင်ရတာလဲ..."
"ကျနော်တို့ ခလုတ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ..စက္ကန့် တောင်မခြားပဲ..ချက်ခြင်းရောက်လာပါတယ်..."
မေးခွန်းမေးသူက ခေါင်းညိတ်လက်ခံလိုက်ပြီး အမှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
"အတွေး ပါ....". အမေးခံရတဲ့သူကဖြေပါတယ်။
"ကျနော်တို့ တွေးလိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ အ၇မ်းမြန်ပါတယ်..ဘယ်လောက်ကွာဝေးဝေး ရောက်သွားပါတယ်"
"လောကမှာ အမြန်ဆုံး အရာက ဘာလဲ ဆိုတာ ဖြေနိုင်ရင်ဖြေပါ..."
"ခင်ဗျားကဘာလို့ အဲ့လိုပြောနိုင်ရတာလဲ ...."
အင်တာဗျူးသူက မေးတော့ ..သူက ဒီလိုပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။
"တကယ်ပါ ဆရာ..ကိုယ်တွေ့ ပါ...ဟိုတနေ့ က ကျနော်အိမ်သာ အရမ်းသွားချင်လာပါတယ်...
အဲ့ဒါနဲ့ အိမ်သာကိုပြေးရပါတယ်... အိမ်သာထဲလဲရောက်ရော... မီးခလုတ်ကိုလဲမဖွင့်နိုင်ခင်... ဘာမှလဲမတွေးနိုင်ခင်မှာပဲ အားလုံးထွက်ကျသွားပါတယ်.."
credit by original writer အပြည့်အစုံသို့ »
6/23/2014 02:50:00 PM funny
6/22/2014 09:07:00 PM funny
တခါတုန်းက မင်းတုန်းမင်းနဲ့ ပြင်သစ်သမ္မတတို့ တွေ့ဆုံပွဲ လုပ်ကြပါသတဲ့။
ပြင်သစ်သမ္မတကလဲ မြန်မာပြည်ကို ကြည့်ပြီး အထင်သေးစွာနဲ့ သူတို့နိုင်ငံမှာ
ဘယ်လို တိုးတက်နေကြောင်း ကြွားလေးတဲ့ အခါ မင်းတုန်းမင်းကြီးလဲ
နောက် ယောက်ျားတွေဆိုတော့ သိတဲ့ အတိုင်း ပြောတဲ့
ပြင်သစ်သမ္မတက သူက တစ်နေ့ကို မောင်းမ
၁၀ယောက်နဲ့ ပုံမှန်နေကြောင်း ကာမာအစွမ်းအလွန်ကြီးကြောင်းပြော
ထိုအခါ မင်းတုန်းမင်းက အားကျမခံ သူက တနေ့ အယောက်၂၀ခန့်နဲ့ နေကြောင်း
ပြန်ပြောပါသတဲ့။ ထိုအခါ ပြင်သစ်သမ္မတက မယုံသလို မျက်နှာပေးနဲ့ ဒီလောက်
အစွမ်းကြီးနေအောင် ဘာတွေများစားသလဲ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲလို
ထိုအခါ မင်းတုန်းမင်းကြီးက စာကလေးအသဲအမြစ်စားကြောင်း
ထို့ကြောင့် ထိုလောက်နေနိုင်နေတာဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
မယုံတာနဲ့ မင်းတုန်းမင်းကြီးကို စိန်ခေါ်ပါတယ် တနေ့တည်း သူမောင်းမ
၂၅ယောက်နဲ့နေပြမယ် နိုင်ရင် ဘာပေးမလဲ မေးတဲ့ အခါ....
ပေးစရာမလိုပါဘူး သူဆို အယောက်၅၀လောက်အထိဆက်တိုက် နေနိုင်ကြောင်းပြောတဲ့
အခါ ပြင်သစ်သမ္မတကလဲ အမြင်ကပ်တာနဲ့ ဒါဆို သူတို့ ပြင်သစ်ပြည်ကိုလာပါ
မိန်းမ အယောက် ၅၀နဲ့ အိပ်ပြပါ အကယ်၍ အိပ်နိုင်ခဲ့လျှင် ပြင်သစ်မှာ
ရှိသတဲ့ မိန်းမတွေထဲက ကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေး အယောက် ၅၀ခေါ်သွားပါ အကယ်၍
မအိပ်နိုင်ခဲ့လျှင် မြန်မာ မိန်းကလေး အယောက် ၅၀ သူပြန်ယူမယ်လို့ ပြောတဲ့
အခါ မင်းတုန်းမင်းကြီးက ကတိတည်ပါစေ ကျွန်ုပ် နောက်လ လာခဲ့ပါ့မယ်လို
ဒီလိုနဲ့ နောက်လရောက်တဲ့ အခါကျတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ
ပဲရစ်မြို့ရှိ ကွင်းပြင်ကြီးမှာ တဲကြီးထိုးပြီး မိန်းမ ၅၀က
အပြင်မှာတန်းစီနေပါသတဲ့ ဘေးမှာတော့ ဂျူရီလူကြီးမင်းများနဲ့တကွ
မြန်မာပြည်မှ တာဝန်ရှိသူတချို့က ဒိုင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ မင်းတုန်းမင်းကြီးက ကာမဆံဆက်ပါသတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ၂၅ယောက် မြောက်မှာ ဒိုင်လူကြီးတွေ လူရေတွက်တာမှားလို့
ငြင်းခုန်နေကြပါတယ်။ ထိုအခါ မင်းတုန်းမင်းကြီးက သဘက်လေးပတ်လာပြီး ဒေါနဲ့
ဘာဖြစ်တာလဲ ဒီမှာ အရှိန်ပျက်တယ်လို့ပြောတော့
ဒိုင်လူကြီးတွေက ရိုရိုကျိုးကျိုးနဲ့ပြောပါတယ် ကျွန်တော်မျိုးတို့ လူရေတာ
မှားသွားလို့ပါ ဘုရား။ ခွင့်လွှတ်ပါ ဘုရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာ.........
့ "တစ်ကပြန်စမယ် ဒီတခါ
credit: ဟာသမင်းသား အပြည့်အစုံသို့ »
6/22/2014 02:58:00 PM funny
လူတစ်ယောက် မီးရထားရုံပိုင်ထံ ရောက်လာကာ မေးမြန်းလိုက်သည်။
"ဒီဘူတာကို ညသန်းခေါင်လောက်မှ ဖြတ်သွားမှာပါ"
"ဒါဆို ခုထွက်မဲ့ ရထားမရှိတော့ဘူးပေါ့"
"ဟုတ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ခင်ဗျား ရထားစီးပြီး အရေးတကြီး သွားစရာများရှိလို့လား" ဟု စိတ်တိုလာသည့် ရုံပိုင်က အော်လိုက်သည်။
ထို့အခါ သူက ပြန်ပြောလိုက်သည်။
"မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ…. ကျွန်တော့် ရထားလမ်း ဖြတ်ကူးချင်လို့ပါ"
အသက်ငယ်ငယ် အမျိုးသမီးချောတစ်ဦး ဟိုတယ်တစ်ခု၏
သိပ်မကြာမှီမှာပင် သူမ၏ အနီးသို့ ချဉ်းကပ်လာသည့်ခြေသံကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်
သဘက်ကိုယူပြီး သူမ၏ကိုယ်ပေါ်သို့ လွှားလိုက်၏။
'' ဒီမှာ အမျိုးသမီး'' သက်ပြင်းရှိုက်သံနှင့်အတူ ဟိုတယ်မန်နေဂျာမှပြောသည်။
'' ဒီနေရာဟာ အ၀တ်မပါဘဲနဲ့ နေပူစာလှုံရမယ့် နေရာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ''
'' ဒါပေမယ့် ရှင်....ရှင်းပြစမ်းပါအုန်း'' သူမကဆက်ပြောသည်-
'' ဒီအပေါ်မှာကျွန်မအတွက်ကြောင့် ဘယ်သူမှအနှောင့်အယှက် ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး''
'' ကျွန်တော် သိပါတယ်'' မန်နေဂျာ၏အသံက ဟိန်း၍ထွက်လာသည်။
''ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားလှဲအိပ်နေတဲ့ နေရာဟာ ဧည့်ခန်းရဲ့  အပေါ်တည့်တည့်မှာပါ။
ကောင်းကင်ရှုခင်းကိုကြည့်တဲ့ တစ်ဘက်မြင် အလင်းဖောက် ဒိုးယိုပေါက်အမိုးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ''
" မေ့တတ်ပုံ "
အမျိုးသမီးတစ်ဦး သင်္ဘောနဲ့ ခရီးထွက်ရန် သဘောင်္ပေါ်အရောက်...
အမျိုးသမီး~~ သင်္ဘောဝန်ထမ်းရေ… ကျွန်မ တစ်ခုခု မေ့နေတယ်ဆိုတာ သေချာတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘာမေ့နေသလဲဆိုတာတော့ ကျွန်မမသိဘူး။
သင်္ဘောဝန်ထမ်း~~ ခင်ဗျားရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရော ရှိရဲ့လားဗျ။
အမျိုးသမီး~~ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မမှာရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်္ဘောလက်မှတ်လည်း
ရှိပါတယ်။ မေ့နေတယ်ဆိုတာ နောက်ထပ် ဘာများဖြစ်နိုင်မလဲ။
သင်္ဘောဝန်ထမ်း~~ ခင်ဗျားရဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်အားလုံးရော ရှိတယ်မဟုတ်လား။
အမျိုးသမီး~~ ရှိတယ်လို့တော့ ထင်တာပဲ။ စစ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်နော်။
တစ်…နှစ်…သုံး…လေး…ငါး…။ ဟုတ်တယ် …အ်ိတ်တွေအားလုံး ရှိပါတယ်။
သင်္ဘောဝန်ထမ်း~~ ဒါဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားလိုအပ်နေတယ်ထင်တဲ့ အရာအားလုံး
အမျိုးသမီး~~ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ တစ်ခုခုတော့ လိုနေသလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့
ဘာလဲဆိုတာတော့ ကျွန်မ စဉ်းစားလို့မရသေးဘူး။
သင်္ဘောဝန်ထမ်း~~ လောလောဆယ် ဒီအတွက် မပူပါနဲ့ဗျာ။ သင်္ဘောက ခုပဲထွက်တော့မယ်။
အမျိုးသမီး~~ အဲ..ဟုတ်ပါရဲ့။ ကျွန်မ ခုမှပဲသိတော့တယ်။ ကျွန်မ မေ့နေတယ်ဆိုတာ
credit to : မချိုမချဉ်ဟာသများ အပြည့်အစုံသို့ »
တရုတ်ရိုးရာအားတိုးဆေး - ဟာသ (အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
6/19/2014 07:25:00 AM funny
ပဲရစ်မြို့ရဲ့ နာမည်ကျော် Lovers Lane တစ်နေရာ… …
တရုတ်လူမျိုး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား တစ်ယောက်ဟာ ကြေးစားမလေးတစ်ယောက်ကို လာခေါ်သွားတယ်။
သူတည်းခိုရာ ဟိုတယ်ခန်းကိုရောက်တော့ ကောင်မလေးကို ပြောတယ်… …
ဆိုတော့ ကောင်မလေးကလည်း သဘောတူတယ်။
ဒါနဲ့ ခဏနေတော့ ကောင်မလေးနဲ့ ပျော်ပါးသတဲ့။
ကိစ္စပြီးတာနဲ့ ကိုရွှေတရုတ်က… …
-ရှုးရှဲ ရှုးရှဲနဲ့ ပြင်ပလေကို တစ်ဝကြီး သုံးခါရှုတယ်
-ကုတင်ရှိရာကို ပြန်လာပြီး ကုတင်အောက်ကို ဝင်သွားတယ်
-ကုတင်ရဲ့ တခြားတဖက်ကနေ ပြန်ထွက်လာတယ်
-ပြီးတော့ ကုတင်ပေါ်တက်လာပြီး တခါ ပျော်ပါးပြန်သတဲ့။
တခါပျော်ပါးပြီးပြန်တော့ ခုနလိုပဲ… …
အဲလိုမျိုး မနားတမ်းလုပ်နေတာ ၅ခါလည်း မြှောက်ရော ကောင်မလေးက သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ အပြုအမူကို အံ့သြပြီး မေးတော့တာပေ့ါ… …
“အော်… ဒါ ငါတို့ရဲ့ တရုတ်ရိုးရာ ကာမလေ့ကျင့်ခန်းလေ၊ အဲလိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ခွန်အားတိုးပွား အကျိုးများပြီး သန်စွမ်းစေတယ်၊ မင်း အမြင်ပဲ မဟုတ်လား”
“ဟုတ်ကဲ့ရှင့်၊ ဒါဆို ကျမလည်း စမ်းကြည့်အုံးမယ်”
-ကုတင်ရှိရာကို ပြန်လာပြီး ကုတင်အောက်ကိုလည်း ဝင်လိုက်ရော… …
ကိုယ်တုံးလုံးလေးတွေနဲ့ ကောင်မလေးကို သွားဖြီးပြီးပြုံးပြကြတယ်… ….
“အဟီး… နေကန်းလား ငင်”
Credit to : Thanlay Ko အပြည့်အစုံသို့ »
6/18/2014 07:31:00 PM funny
ညတစ်ညတွင် ဗစ်တိုးရီးယားက ယောက်ျားဖြစ်သူ ဘက်ခမ်းကို နှိုးသည်။
““ယောက်ျား…ထစမ်းပါဦး… ကျွန်မ အိုက်တယ်ရှင့်””
ဘက်ခမ်းက အိပ်ရာမှထပြီး အခန်းပြတင်းပေါက်တွေ ဖွင့်လိုက်သည်။ ခဏအကြာတွင်
မိန်းမဖြစ်သူမှ ထပ်ပြီး နှိုးပြန်သည်။
ယောက်ျားက အိပ်ရာမှထပြီး စောင်တစ်ထည်ထပ်ယူပေးလိုက်သည်။ ခဏအကြာတွင်
““ယောက်ျား… ကျွန်မကို အမျိုးသားတစ်ယောက်က ဖက်ထားတဲ့ နွေးထွေးမှု
ထိုအခါ ဘက်ခမ်းက စိတ်မရှည်တော့သဖြင့် ပြောလိုက်သည်။
““ကြံကြံဖန်ဖန်ကွာ….မနက်၂ နာရီထိုးကြီးမှာ မင်းအတွက်ယောက်ျားကို ငါက
6/17/2014 07:10:00 PM funny
ဘွဲ့ရပြီးသိပ်မကြာတဲ့တစ်ရက်မှာ ကောင်မလေးက ကျွန်တော်ဆီ smsပို့တယ်။ “ငါတို့ လမ်းခွဲရအောင်”တဲ့။ ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းမယ်ကြံကာရှိသေး သူနောက်တစ်ကြောင်းထပ်ပို့တယ်။ “ဆောရီးပဲ… ငါ မှားပို့မိတယ်”တဲ့။ အဲအချိန်ကျမှ ကျွန်တော်အသည်း တစ်စစီကြွေရော… (ဇန်နဝါရီ ၁၅ရက်)
ချစ်သူများနေ့မှာ အလယ်တန်းတုန်းက ကျွန်တော်တိတ်တခိုးချစ်ခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေးကို sms ပို့လိုက်တယ်။ “တကယ်လို့ ဆန်ပြုတ်တစ်ခွက်ရှိရင်၊ နင့်ကို တစ်ဝက်အရင်တိုက်မယ်၊ ကျန်တစ်ဝက်ကို အေးမသွားအောင် ငါ့ရင်ခွင်ထဲထည့်ထားမယ်”ပေါ့။
မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သူ့ဆီက ပြန်ပို့လိုက်တဲ့စာရတယ်။ “နင့်ကို ဘယ်သူမိတ်ဆက်ပေးတာလဲ? တစ်ခါ ၄ဝဝဝ၊ ညပါရင် ၇ဝဝဝ” တဲ့။ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ရက်)
ဒီနေ့တစ်နေကုန် နေလို့မကောင်းဘူး။ မနေ့ညက တဘက်သတ်စွဲလမ်းခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးကို sms ပို့လိုက်တာ သူက တစ်ခါ ၄ဝဝဝတဲ့ စာပြန်တယ်။ သူ လမ်းမှားနေပြီ။ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဝမ်းနည်းမိတယ်။ ပိုက်ဆံအိတ်ထုတ်ပြီး ပိုက်ဆံရှာကြည့်တော့ ကျွန်တော်ပိုဝမ်းနည်းသွားတယ်။ သူနဲ့အတူ လမ်းလိုက်မှားဖို့ ကျွန်တော့်မှာ အရင်းတောင်မရှိခဲ့ပါလား…. (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ရက်)
ဒီနေ့စာဖတ်နေရင်းက Kangxiဘုရင် အသက်(၂၃)နှစ်မှာ တိုင်းပြည့်ရှင်ဘုရင်မင်းကြီးဖြစ်နေပြီတဲ့။ ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီး ဝမ်းနည်းမိတယ်။ နောက် စာဆက်ဖတ်ရင်းက Tongzhiဘုရင် အသက်(၂၃)နှစ်မှာ နတ်ရွာစံတာ၎နှစ်ရှိခဲ့ပြီတဲ့။ ကျွန်တော့်စိတ် သက်သာရာရသွားတော့တယ်။ (မတ်လ ၁၁ရက်)
ဘုရားသခင်က … ငါအလင်းလိုတယ်ဆိုတာနဲ့ နေ့ဆိုတာ ရှိသွားတယ်။
မိန်းမလှက…… ငါ စိန်လက်စွပ်လိုတယ်ဆိုတာနဲ့ စိန်လက်စွပ်ရသွားခဲ့တယ်။
ချမ်းသာသူက….. ငါ မိန်းမလှလိုတယ်ဆိုတာနဲ့ မိန်းမလှရသွားခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်က…. ငါ ကွန်ပြူတာသုံးမယ်ဆိုတာနဲ့ မီးပျက်သွားခဲ့တော့တယ်။ (ဧပြီ ၂၃ရက်)
တစ်ည ထမင်းစားပြီး ဝရန်တာမှာ ဆေးလိပ်ထိုင်ဖွာနေတုန်း ကောင်းကင်ပေါ်မှာ ရုတ်တရက်အလင်းတန်းတစ်ခု ဖြတ်သွားတယ်။ ကြယ်ကြွေပြီဆိုပြီး ဆု ၄,၅,၆ခုလောက် တောင်းလိုက်တယ်။ ဆုတောင်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ ဆေးလိပ်ကတိုနေပြီ။ နှစ်ချက်လောက်ဖွာပြီး လွင့်ပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ အောက်ထပ်က ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရုတ်တရက်ထအော်တယ်။ “ဟော… ကြယ်ကြွေပြီ… မြန်မြန်ဆုတောင်း”တဲ့။ (မေ ၃ရက်)
credit > နိုင်းနိုင်းစနေ အပြည့်အစုံသို့ »